कमब्याक योजना बनाउँदै बिपना (फोटो/भिडियो) « Ramailo छ
कमब्याक योजना बनाउँदै बिपना (फोटो/भिडियो)
अभिनेत्री बिपना थापा बिहेपछि पर्दामा फकिएकी छैनन् । भारतको मथुरा राज्य घर भएकी बिपना बेला बेला माइती काठमाण्डौमा आउने गर्दछिन् । छोरा हुर्काएकी बिपना अब भने फिल्ममा फर्किने सोचमा छिन् । भिडियो हेर्नुस् :
‘छिट्टै अभिनयमा फर्किनेछु’, रमाईलो छ सँगको कुराकानीमा बिपनाले भनिन्, ‘छोरा ठुलो भैसक्यो । अब फिल्ममा खेल् भनेर साथीहरुले पनि दबाब दिन थालिसके ।’ एक सय एघार वटा नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेकी बिपना पुनः अभिनय मार्फत नै कमब्याक गर्न चाहान्छिन् । ‘बिपना थापा भनेर चिनिएकै अभिनयले हो । त्यसकारण अभिनय मार्फत नै फर्कन चाहान्छु’, उनको बुझाई छ ।
बिपनाले अब खेल्ने फिल्ममा भूमिका कस्तो होला ? अनि नायक को होलान् ? ‘मलाई यही रोल होस भन्ने छैन् । म कलाकार हुँ जुनसुकै रोल गर्छु’, बिपनाले हाँस्दै भनिन्,’ जेमा पनि फिट हुने भएर मलाई आलु हिरोइन भन्थें । त्यसैले मलाई यही हिरो चाहिन्छ भन्ने छैन ।’ कुराकानीको क्रममा आफुले अभिनयबाट सन्यास नलिएको समेत बिपनाले बताइन् ।
उसो त उनका समकालिन हिरोइनहरु निरुता सिंह र जल शाह लगायत अहिले फिल्ममा सक्रिया छैनन् । निरुताले भर्खरै ‘नाईं नभन्नू ल ५’ मार्फत केमियो रोलमा कमब्याक गरेकी छन् । आफ्नो बेलाकी बोल्ड हिरोइन बिपनाको कमब्याक चाहिं कस्तो होला त ?